Ny TRF dia manangona loharano | Ny valin'ny Fanamarinana
Home Momba anay TRF Manangana loharanon-kevitra
Ny Reward Foundation dia manome anao loharano farany farany hanampy anao hitarika anao amin'ny lozam-pifamoivoizana mety hijerena sary vetaveta amin'ny Internet. Amin'ity fizarana ity dia hahita zavatra mahaliana be dia be ianao. Nanomboka namolavola ny fitaovanay manokana izahay ary faly fa afaka manolotra famerenana boky, horonan-tsary momba ny siansa amin'ny pôrnôgrafia, rakipeo fisaintsainana ary fikarohana vaovao maro. Manome torohevitra momba ny fahazoana miditra amin'ireo taratasy ara-tsiansa tany am-boalohany ihany koa izahay.
Raha ny fihetseham-pon'ny olombelona no entin'ny fihetseham-po voalohany, dia tsy ny teknolojia. Mifototra amin'ny lojika madio izy io, natsangana miaraka amin'ny algorithmes natao handraisana sy hihazona ny saintsika. Ny aterineto dia fitaovam-pampana mivantana ary mety hisy fiantraikany lehibe kokoa eo amin'ny famolavolana ny soatoavina ara-kolontsaina noho ny an'ny fianakaviana. Ny fahatakarana ny vokany dia zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika, indrindra ho an'ireo taranaka ho avy. Ho setrin'izany hevitra izany, nihaino izay tian'ny olona ho fantatra momba ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo, ny fifandraisana ary ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto. Hatramin'ny tapaky ny 2014 ny asantsika amin'ny tanora sy ny matihanina amin'ny sehatry ny fanabeazana ara-pananahana dia nahita ny tsy fahafaham-pon'ny mombamomba ny kalitao, ny maha-zava-dehibe ary ny fahombiazan'ny loharanom-pampianarana ankehitriny. Mampivelatra ny loharanon-karena ny TRF mba hanamafisana ny tsy fitoviana.
Ny solontena avy amin'ny The Reward Foundation dia efa niresaka tamin'ny hetsika am-bahoaka roapolo mahery nanerana an'i UK. Niresaka tamin'ny mpihaino matihanina tany Etazonia, Alemana, Torkia ary Kroasia ihany koa izahay.
Niresaka tamin'ny endriny ankizilahy sy ankizivavy manontolo izahay any an-tsekoly, ary koa miara-miasa amin'izy ireo amin'ny tarika madinika ary ny iray amin'ny tsirairay. Izany dia nitarika antsika hampiasa ny teknika momba ny Human Centered Design mba hampivoarana ireo loharanom-baovao izay mety hitodika amin'ireo fahalemen'ny fitaovana ankehitriny.
Amin'ny herintaona, ny The Reward Foundation dia manantena ny hamolavola drafitra ho an'ny fampiofanana amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa.
Ireto ny sasany amin'ireo loharanom-bolantsika ankehitriny…